Dastuurka cusub ee Somaliya oo loo soo bandhigay shacabka Puntland & Gudd. gudiga dastuurka oo tafaasiil ka bixisay qaybo qoraalka dastuurka. – Radio Daljir
Dastuurka cusub ee Somaliya oo loo soo bandhigay shacabka Puntland & Gudd. gudiga dastuurka oo tafaasiil ka bixisay qaybo qoraalka dastuurka.
Garowe, Aug 29 – Marwo Xaawa Cali Jaamac, Gudd. gudiga dastuurka cusub ee Somaliya oo ka hadashay munaasabad lagu soo bandhigay qabyo qoraalka dastuurka ayaa tafaasiil ka bixiyey shaqada guddiga iyo unugyada dastuurka.